श्रीमतीलाई तनाव दिन अपहरणको नाटक ! – Everest Dainik – News from Nepal
श्रीमतीलाई तनाव दिन अपहरणको नाटक !
२०७५, ११ श्रावण शुक्रबार
काठमाडौँ, साउन ११ । एकाबिहानै आएको एउटा सूचनाले प्रहरी परिसर काठमाडौंमा हल्लीखल्ली मच्चाइदियो । टोखा क्षेत्रबाट एक नागरिकले फोन गरेर आफन्त तनहुँ स्थायी घर भई नयाँ बसपार्कमा विद्युतीय सामानको पसल गर्ने शिवराज घिमिरे अपहरणमा परेको बताए ।
सूचना दिनेका अनुसार टोखास्थित डेराबाट कामका लागि निस्किएका शिवराज आफैंले आफू अपरहणमा परेको, अपहरणकारीले लगातार कुटिरहेको बताउँदै फोन गरेको भन्दै यथाशक्य उद्धारका लागि प्रहरी गुहारे। राजधानीको व्यस्त बसपार्क क्षेत्रबाट एकाबिहान भएको घटनाले प्रहरीलाई पनि झस्काइदियो।
सूचना पाउनेबित्तिकै प्रहरी परिसर काठमाडौंले सादा पोसाकका ५ प्रहरीलाई अपहरणकारी खोजीमा परिचालन गर्‍यो। परिसरकै आदेशमा बसपार्क प्रभागका प्रहरी टोली, प्रहरी वृत्त महाराजगन्जबाट डिएपीसहतिको टोली पनि खोजी कार्यमा परिचालित भए। अपहरितको ठेगाना पत्ता लगाउन प्रहरीले उनको मोबाइल लोकेसन पनि ट्रेस गर्‍यो।
अपहरित शिवराजको मोबाइल लोकेसन काँडाँघारी हुँदै काभ्रेको पनौतीतिर सोझिएको देखियो। लगत्तै प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुखलाई फोन गरी खोजीमा टोली परिचालित गरायो। प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी विश्वराज पोखरेलले भने, ‘दिनभर हामी खोजी कार्यमा जुटिरह्यौं।’
अपहरित व्यक्ति फेला नपरेर निराश बनेको प्रहरीले साँझ ढल्केपछि सूचना पायो। अपहरित व्यक्ति स्वयम्भूस्थित शिवालय मन्दिर नजिक छन् भन्ने। प्रहरी टोली त्यत्तै सोझियो। मन्दिरको छेउमा २५ वर्षीय शिवराज भेटिए। त्यसपछि रहस्य खुल्यो, न उनी अपहरणकारीबाट कुटिएका थिए, न साँच्चिकै अपहरणमा परेका थिए। प्रहरीले केरकार गरेपछि उनले श्रीमतीसँग बारम्बार झगडा हुने गरेकाले उनैलाई टेन्सन दिन अपहरणको नाटक गरेको बताए। शिवराजले आफू बस चढेर पनौती पुगी दिनभर उतै घुमेर फर्केको बताए। कान्तिपुरमा खबर छ ।
ट्याग्स: अपहरणको नाटक, शिवराज घिमिरे
विवाहको ४ दिन अगाडि टिपर दुर्घटनामा मृत्यु
माघ १७ गतेदेखि चितवन प्रिमियर लिग
५ हजार घुस लिने सशस्त्रका जवानविरुद्ध मुद्दा दायर
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनः कहाँ को निर्वाचित? (सूचीसहित)
जिम्बाब्बेविरुद्ध श्रीलंका १० विकेटले विजयी, म्याथ्यूजको पहिलो दोहोरो शतक
कोरोनाभाइरस संक्रमणः चीनको वुहानमा हृदयाघातले मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउन समस्या
डिस होमद्वारा ‘राइम्स च्यानल’ सञ्चालनमा
एसियाकै लामो झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा